अन्ताक्षरी खेल्दै केकी:: Mero Desh
अन्ताक्षरी खेल्दै केकी
Published on: २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०५:१०
घरबन्दीलाई कसैले सही सदुपयोग गरिरहेको छ भने ती केकी अधिकारी हुन् । एक त अति व्यस्त रहेकी केकीलाई लकडाउन थकाइ मार्ने अवसर भएको छ । यति मात्र नभएर पढाइमा रुचि राख्ने उनी फुर्सदको यो समय पढाइमा पनि खर्च गरिरहेकी छिन् । त्यतिले मात्र
चित्त नबुझेर केकी अहिले आरजे पनि बनेकी छिन् । उनले बताएअनुसार उनको रेडियो स्टेसन चाहिँ इन्स्टाग्राम हो । यो स्टेसनमा उनले अन्ताक्षरी खेल्न सुरु गरेकी छिन् । रेडियोमा बोल्ने सपना पूरा गर्न उनले इन्स्टालाई रेडियो बनाएकी हुन् । यहाँ उनले हरेक मंगलबार बेलुकी ६ देखि ७ सम्म एक घण्टा सेलिब्रिटीसँग अन्ताक्षरी खेल्न थालेकी छिन् । अन्ताक्षरीमा नेपाली गीत मात्र गाउन पाउने नियम बनाएकी छिन् भने हारजीतको टुंगो जसको पालामा गएर ७ बजेको समय सकिन्छ, त्यसले लगाउँछ । क्रिएटिभ हुन त कसैले केकीसँग सिकोस् !
मंसिर अन्तिम यता खाली रहेको चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षका लागि आवदेन खुलेसँगै कोरोनाका कारण सुस्त फिल्म क्षेत्र भित्रभित्रै म्याराथन दौडिने तयारीमा छ। को अध्यक्ष होलान् र को–को भिडिरहेका छन् ? भन्ने चासो सबैलाई छ। अध्यक्षको दाबेदारीमा विभिन्न व्यक्तिको नाम आइरहेको छ।
यो भीडमा निखिल उप्रेतीको नाम पनि आएको छ। चर्चाअनुसार निखिल भित्रभित्रै आफ्ना लागि लबिङ गरिरहेका छन्। तर, उनले अध्यक्ष पद कसरी पाउलान् ? धेरैका लागि चासोको विषय छ यो। सरकारले निकालेको सूचनाअनुसार अध्यक्ष बन्नका लागि उम्मेदवारले स्नातक तह वा १० वर्षको अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। त्यो पनि नभए २० वर्षको अनुभव र आईएसम्मको पढाइ चाहिनेछ। तर, निखिलले भने बेला–बेलामा सर्टिफिकेटवाला पढाइको काम नभएको भन्दै सर्टिफिकेट नै च्यातेको कुरा बताउने गरेका थिए।
कतै–कतै त उनले सर्टिफिकेट देखाएर जिन्दगीमा कुनै काम नगर्ने पनि घोषणा गरेका थिए। अब सर्टिफिकेट नै च्यातिसकेका भनेका निखिलले अध्यक्षमा कसरी उम्मेदवारी देलान् त ? धेरैलाई चासो छ। उनले कतिसम्म गफ दिने रहेछन्, यही प्रकरणले पुष्टि गर्नेछ।